Caabudwaaq: 2 qof ayaa dhimatay 10 kalena oo 6 Haween Yihiin Ayana waa Dhaawac – Radio Daljir
May 28, 2017 1:50 g 1
Caabudwaaq – Inta ka hubo labo qof ayaa dhimatay, 10kana kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii is maandhaaf gacan kahadal dhaliyey uu ka dhashay goob raashin lagu qaybinayey oo ku taalla duleedka galbeed ee degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduuda sida ay Daljir u xaqiijiyeen maamulka degmada cWaaq.
Weerarkaan ayaa yimid kadib markii illaaladii raashinkaasi la qaybinayey ay is maandhaafeen nin hubaysan oo watay kaarka cunta qaybta, kaasoo khilaaf dhexmaray isaga iyo illaalada kadib rasaas oodda uga qaaday goobtii raashin qaybintaasi ka socotay, waxaana halkaasi ku dhintay labo nin oo illaalada raashinkaasi ka mid ahaa, 10 qof oo kale oo 6 ka mid ah ay haween yihiinna waa dhaawacmeen.
Dadka dhaawacay oo ay ku jiraan 6 haween ah ayaa badankoodu ah dadkii barakacayaasha ahaa ee raashinkaasi loo qaybinayey, kuwaasi oo haatan lagula tacaalayo dhaawacooda goobaha caafimaadka ee Caabudwaaq, waxaana guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada cWaaq Muuse Axmed Maxamed ‘Muuse Inji’ uu u sheegay Radio Daljir haweenkaasi dhaawacmay qaarkood in ay aad u liidato xaaladdoodu.
Ninkii weerarkaasi gaystay ayaa isla markiiba ka baxsaday goobta, mana jirto illaa hadda wax tallaabo ah maamulka iyo waxgaradka deegaanku ay ku tallaabsadeen oo ku aadan arrinkaasi, waxaana guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Caabudwaaq uu sheegay maamul ahaan in aysan awood u lahayn wax ka qabashada arrimahaan oo kale maadaama uusan jirin boolis degmadu leedahay oo shaqeeya.
Dhawr jeer oo hore ayaa degmada Caabudwaaq waxaa sidaan oo kale uga dhacay falal dil ah, ayna ku jireen dilal wadareed, kuwaasi oo badankooda aan waxba laga qaban illaa hadda, waxaana jira haatan urtumo iyo aanooyin qabiil oo beelaha deegaanka deggan dhaxyaalla, welina aan xal muuqda loo helin.
Halkaan hoose ka dhegayso wareysiga madaxda arrimaha bulshada ee maamulka degmada Caabudwaaq Muuse Axmed Maxamed ‘Muuse Inji.’
Maanka Dadweynaha & Magrafoonka Daljir iyo Maxamuud Fantastik (dhegayso)
Xabiiba Ayanle 3 months
Ayagaa islaynaya jaahilnimo darteed